शालिकरामका दाईको आरोपः ‘आर्यघाटमा रबि लामिछाने हतास देखिनुहुन्थ्यो, नबोली भाग्नुभयो’ - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं । माउन्टेन टेलिभिजनका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्याका विषयमा नयाँ-नयाँ तथ्यहरु खुलासा हुँदै गएका छन् । मृतक पत्रकार पुडासैनीका दाई तथा नवुकोट जिल्ला बेलकोटगढी नगरपालिका-३ का सदस्य दीपक पुडासैनीले आत्महत्यामा पत्रकार रवि लामिछानेले दूरुत्साहन गरेको दावी गरेका छन् । रविसहित अन्य दुईले एक नर्ससँग सम्बन्ध जोड्न खोजेको पनि उनले बताएका छन् ।
मंगलबार बिहान दीपकसँग कुराकानी गर्दा उनले यस्तो धारणा राखेः
‘मसहित पाँच जना र प्रहरीका एसपी एवं अनुसन्धानमा रहनु भएका व्यक्तिहरु मिलेर हामीले शालिकरामको सुसाइड भिडियो हेरेका छौं । सुसाइड भिडियोमा शालिकरामले रवि लामिछानेसहितले आफूलाई मर्न बाध्य पारेको भन्ने कुरा बताएका छन् । यो विषयमा अब हामीले किटानी जाहेरी दिन खोजका थियौं । तर चितवनका प्रहरी प्रमुखले अहिले हतार गर्न पर्दैन, अनुसन्धानले कसैलाई कारबाही गर्नुपर्ने वा अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नु पर्ने भयो भने पछि किटानी जाहेरी दिए पनि हुन्छ भन्नुभयो । उहाँहरुले नेपालको नयाँ कानुन अनुसार कसैले कसैलाई मर्नका लागि विवस बनाउँछ, आत्महत्या गर्न दूरुत्साहन गर्छ भने ५ वर्ष जेल र ५० हजार जरिवानासम्म हुन्छ ।
रवि लामिछाने र उहाँको टिमले हाम्रो भाईलाई पनि त्यस्तै समस्यामा पारेर स्थिति किराल बनाएर मर्न बाध्य पारेको भन्ने हाम्रो दावी हो । हाम्रो दावी जस्तै प्रहरीको अनुसन्धानले पनि देखायो भने दोषीहरुलाई प्रहरीले कानुनको दायरामा ल्याउँछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।
हामी नेपाल प्रहरीमाथि विश्वास राख्छौं । चितवनका प्रहरी अधिकारीहरुको सम्पर्कमा हामी बसेका छौं । फोरेन्सिक परीक्षणका लागि शालिकरामको मोबाइल पनि प्रयोगशालामा पठाइएको छ ।
याे पनि पढ्नुस रविमाथि आरोप प्रमाणित भए दफा १८७ अन्तर्गत कार्वाही हुनसक्ने, के छ कानुनमा व्यवस्था?
मैले भिडियोको विषयमा धेरै कुरा गर्न मिल्दैन । अहिले नै सबैकुरा भन्न सक्दिनँ । किनभने यसबाट अनुसन्धानमा प्रभाव पर्न सक्छ । अभियुक्त भाग्न सक्छ । हामीले नेपाल प्रहरीका आइजिपी सर्वेन्द्र खनाललाई पनि भेटेर हाम्रो मान्छेलाई मर्न बाध्य बनाउनेहरु छन् । उनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेका छौं । उहाँले पनि दोषी उम्कन नपाउने आश्वासन दिनु भएको छ ।
हामी प्रहरीको माथिल्लो तहमा मात्रै होइन, अन्य निकायमा पनि पुगेका छौं । तर सबै कुरा अहिले भन्न चाहन्न । किनभने अनुसन्धानको दायरामा भएको विषयमा मैले धेरै बोल्दा कुरा बिग्रिन सक्छ ।
हामीले खबरदारी गर्न पनि आवश्यक भएका केही निकायमा गएका हौं । रवि लामिछाने आर्यघाटमा आउनु भएको थियो । उहाँले केही बोल्नु भएन । उहाँ हतास मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो । विभिन्न मिडियाका पत्रकारहरु पनि आउनु भएको थियो । उहाँहरुले पीडितको आफ्नै भाईसँग अन्तर्वार्ता लिँदा भरतपुरमा गएर केही नबोल्ने ? अनि अहिले आर्यघाटमा मिडियाबाजी गर्ने ? भन्दै हामीले उहाँहरुलाई धपाएको पनि हो ।
याे पनि पढ्नुस रविले अब विदेश जान अदालतको अनुमति लिनु नपर्ने
रवि लामिछाने पनि भाग्नुभयो । रवि लामिछानेलाई हामीले आरोप लगाउनु अघि नै फेसबुकमा लाइभ गरेर स्पष्टिकरण दिनु भएछ । हामीले सोध्नु अघि नै जवाफ दिनुपर्ने कारण पनि अनौठो छ ।
यो घटनामा दुई पत्रकार र एक महिलाको नाम जोडिएको छ । ती महिलालाई शालिककै साथीहरुले जोडिदिएका रहेछन् । ती महिला पनि दोषी हुन् । हाम्रो भाइलाई मर्न बाध्य पारिएको हो । कारबाही हुनुपर्छ ।’ नेपाल आजबाट साभार
ट्याग्स: रबि लामिछाने, शालिकराम पुडासैनी